नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मैले पनि केहि समय नेताहरु सुध्रिन्छन् कि भन्दै स्वतन्त्र रहेर आलोचना गरें, तर भ्रस्ट नेताको भुडीको बोसो एक पित्को नि झरेन
मैले पनि केहि समय नेताहरु सुध्रिन्छन् कि भन्दै स्वतन्त्र रहेर आलोचना गरें, तर भ्रस्ट नेताको भुडीको बोसो एक पित्को नि झरेन
- ज्वाला सँग्रौला
अहिले देशका बिभिन्न स्थानहरुमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु उठ्नु भएको छ । केहि उम्मेद्वारहरुले जबर्जस्त भिजन प्रस्तुत गरेर जनताको मत जितिरहनु भएको छ । स्थानिय निकायलाइ दलगत बनाउन नहुने भन्ने मनसायले उठेका स्वतन्त्र र भिजनरी सबैलाई जितको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु । म आफू कुनै एक पार्टीमा आबद्द भएतापनि राम्रो मान्छे नेतृत्वमा आईदेओस् भन्ने मेरो चाहना छ किनकी राजनिती जनताको लागि हुनुपर्छ न कि कुनै पार्टीको बचाउको निम्ति । तर यति भन्दै गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी प्रति मेरो चाहि आफ्नै खाले बिचार छ । खासमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेको राजनीति गर्ने मान्छे हैन भन्ने धेरैलाइ लाग्दो हो । तर स्वतन्त्र उम्मेद्वार एकदम सेफ जोनमा बसेर राजनीति गर्ने ब्यक्ति हो। सेफ जोन किन भन्दा एकातिर राजनैतिक पार्टीको ट्याग पनि नलाग्ने र अर्कोतर्फ जनताको माया पनि पाईने। यस अर्थमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दोहोरो भूमिकाको राजनैतिक प्राणी हो। यो पटक केहि हेभि वेट स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु उठ्नु भएको छ जस्लाई संजाल देखि मिडिया सम्मले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । भिजन भएका सबैको जीत होस् र हुनुपनि पर्छ । तर स्वतन्त्र भएर यी ठूला टाउके दलहरुसंग भिडेर जित्नै गार्हो , अनि दोस्रो कुरो
जिते पनि एक्लो बृहस्पतिले काम गर्नै गार्हो। मुखले भन्न त सजिलो छ , म मेयर भएभने सबै मेरै हातमा हुन्छ । तर कुरा त्यसो होईन , मेयरसंग काम गर्न वडा सदस्यहरु समेत जोडिएर आउनै पर्छ । हरेक कुरामा मेयरले सबैसॅग छलफल गरेर मात्र काम गर्ने वातावरण पाउछन् । झन् अलिकति पपुलर मान्छेले जित्यो भने त उस्को कार्यकाल फेल गराउन सबै बेईमानहरु लागि पर्छन् । जित्नु भन्दा अगाडि मात्र जनताको साथ हुन्छ स्वतन्त्रलाइ । त्यसपछि गार्है गाह्रो। अनि पछि बाध्य भएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार कुनै न कुनै दलमा समाहित हुन पुग्छन् । २०७४ सालमा मनाङबाट स्वतन्त्र लडेर जितेका डन भनेर चिनिने दिपक मनाङेले समेत आफूलाइ एमालेमा मिसाए । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जहॅा स्वतन्त्र भैरहन गार्हो छ भन्ने कुरा बुझ्न । त्यसैले मलाइ के लाग्छ भने यी भ्रस्टहरु बिरुद्व लड्न स्वतन्त्र उम्मेद्वारी उपर्युक्त बिकल्प हुदै होईन ।भ्रस्ट दलको बकल्प इमानदार दल नै हो न कि कुनै ब्यक्ति। कि त नया पार्टी खोलेर जबर्जस्त जनता बटुलेर हिड्न सक्नु पर्छ , कि त फटाहा मध्ये कम फटाहा पार्टी रोजेर नेतृत्व हातमा पार्दै परिवर्तनको डोजर चलाउनु पर्छ । यसपटकको चुनाबमा उठेका अति चर्चा पाएका बालेन शाहले जिते भने जनताको इतिहास बन्छ । तर हारे भने चाहि के हुन्छ ? जबाफ प्रस्टै दिन्छु- हारे भने पनि उनि यतिकै चुप बस्नेवाला छैनन् किनकी उनलाइ देश राम्रो बनाउने हुटहुटी छ । तसर्थ उनले आफ्ना समर्थक र अहिलेका स्वतन्त्र सबैलाई समेटेर एउटा पार्टी बनाउलान्। पार्टी बनाएपछि झण्डा पनि बनाउनु परिगो। त्यो झण्डा बोक्नु परिगो। अनि जतिसुकै आफूले राम्रो गरे नि अन्य दलले गिराउन सुरु गरि हाल्छन् र केहि स्वतन्त्र बस्न मन पराउनेहरुले पनि छेडछाड सुरु गरिहाल्छन् । अहिले स्वतन्त्रलाइ समर्थन गर्ने साथीहरु कतिपयले पार्टीको झण्डा बोक्नेहरु मान्छे नै हैनन् जसरी आलोचना गरिरहनु भएको छ । तर तपाईहरु राजनैतिक प्राणी हो भने जीबनभर स्वतन्त्रै बसेर हारै हार अनि आलोचनाकै मात्र राजनीति गरिरहनु हुन्छ कि कुनै पार्टीमा लाग्नु हुन्छ? अथवा नया दल दर्ता गर्नु हुन्छ?? नया दल दर्ता गरेर कति बर्षमा संगठन बिस्तार गर्न सफल भैन्छ र कता कताबाट जितिन्छ ?
हो, मैले पनि केहि समय नेताहरु सुध्रिन्छन् कि भन्दै स्वतन्त्र रहेर आलोचना गरें। मैले राजनीतिको भुंग्रोमा फ्यालेका शब्दका मिसाईलहरु जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि तिनीहरुले मेरा फ्यान फलोअर्स बटुल्ने मात्र काम गरे तर भ्रस्ट नेताको भुडीको बोसो एक पित्को नि झरेन । तसर्थ देशको माटो सुहाउदो, भूगोल सुहाउदो पार्टीमा प्रबेश गरें । म पनि स्वतन्त्र रहेरै स्वतन्त्रलाइ सघाउने थिएं, तर त्यसले खास उपलब्धी हुने मैले नदेखेकै हो। समय छोटो छ , राष्ट्रबादी शक्तिहरु तितर बितर हुनु अघि नै एउटा मन्चमा अटाउनु पर्छ भन्ने सोचेर आज म यहॅा उभिदै गर्दा साथीहरुले हरेक पार्टीका लागि भोकभोकै खटेको देखेकी छु, स्वतन्त्रका लागि त झन् बिचराहरु लाईफ नै रिस्कमा राखेर खटिरहनु भएको छ । अबको यो स्थानिय निर्वाचनको नतिजालाई आत्मसात गर्दै पार्टीभित्रै बाट अर्थपूर्ण खटाइ खट्नु पर्छ , पार्टी भित्रै रहेर लड्नु पर्छ अनिमात्र भ्रस्टहरुको सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाइ चाहिं, ब्यक्तिले भन्दा संगठनले एकमुस्ट लड्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाइ चाहिं। म गलत पनि हुन सक्छु ..!
एउटा अर्को प्रसङ्ग :
हिजोको दिनमा सिला खोज्नुपर्ने पार्टी राप्रपा राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व सम्हाले पछि हर चोक , चिया पसल , गॅाउॅ, गल्ली , गोठ र सडकमा जताततै मौलाउनुको कारण एउटै छ , त्यो हो इमानदार मान्छेको हातमा पार्टी पर्नु । अहिले राप्रपाको बाक्लिदो भीडसंगै यस्ले चुनाबमा निक्कै राम्रो नतिजा ल्याउने कुरामा दुईमत छैन । आसन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले जे जति मत ल्याए नि त्यो सन्तोषजनक नै रहने छ र यस्ले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा बल पुर्याउने निश्चित छ ।निर्वाचनको पूर्बसन्ध्यामा पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको ओईरोलाइ स्वागत गर्दै देशैभरिका आमसभामा हरुमा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले अहिले अध्यक्ष ज्युलाई भ्याई नभ्याइ छ । दिनमा १० वटासम्म आमसभा भ्याउने , भोक तिर्खा,निन्द्रा केहिको पनि वास्ता नगरी जनताको सामु उभिएर घण्टौ बोल्दै र देशको बारेमा सम्झाउदै हिड्ने वहॅाको सक्रियता अचम्मकै छ । वहॅालाई पार्टी हॅाक्न उमेरले पनि साथ दिएको छ र बिचारले पनि साथ दिएको छ ।७० काटेका राले सिंगाने नेताहरुले अन्य पार्टी कब्जा गरेर युवाहरुलाई उदण्ड गतिबिधिमा मात्र सीमित राखेको बेला राप्रपाले चालेको नेतृत्व परिवर्तनको अग्रगामी कदम यो देशका धेरै नागरिकहरुलाई मन परेको हुनाले धेरै जसो बिद्वान , बुद्दिजीबीहरुको प्रवेश यो पार्टीमा भैरहेको छ । हिजोको दिनमा बन्दुक बोकेर युद्व लडेका साथीहरु देखि गणतन्त्र मानेर आएका मान्छेहरु पनि राप्रपालाइ अब सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर आउनु भएको छ। पार्टीले सबै खाले बिचारधाराका ब्यक्तित्वहरुलाई मिलाएर लॅादै छ । महिलाको सम्मान छ पार्टीमा । क्षमताको आधारमा सबैलाई मिलाउदै लाने छ र भ्रस्टाचार बिरुद्व मिसाईल बनेर पार्टी खडा हुंदै छ । म आफै पार्टिभित्र भएकाले यो पार्टीका हरेक गतिबिधिहरुसॅग नजिक छु। म राम्रोलाई राम्रै भन्छु र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न साईत कुर्दिन । पार्टीका हरेक जनप्रतिनिधीहरुलाई भ्रस्टाचार नगर्ने सपथ खुवाएर मैदानमा उतारेको छ राप्रपाले । यो उदाहरणीय नजीर हो । तसर्थ देशले एकपटक राप्रपालाई सघाउनु पर्छ र मुलुकको मुहार फेर्न साथ दिनुपर्छ । यदि कुनै दिन हाम्रा उम्मेद्वारहरु पार्टीको बिधान कुल्चेर भ्रस्ट भएछन् भने बिपक्षी दल कोहि चाहिन्न भन्डाफोर गर्न । हाम्रै पार्टीमा छन् एक से एक योद्वा..!
Posted by www.Nepalmother.com at 9:37 AM